LG na-ekpughe X5 na X Skin na Korea | Gam akporosis
LG kpughere X5 na X Skin na South Korea na gam akporo 6.0
LG fọrọ nke nta ka ọ tụpụ ya na windo nwere nnukwu ọnụ ahịa dị iche iche nke anyị hụrụ na ọ bụghị ogologo oge gara aga X Ike, X Mach, X Style na X Max. Usoro nke ngwaọrụ rutere onye ọ bụla nwere ihe mgbaru ọsọ doro anya na ịkwado mkpa nke onye ọrụ chọrọ nnukwu imewe, nnukwu igwefoto ma ọ bụ ama nwere nnukwu ihuenyo iji mepụtakwa ọdịnaya niile nke multimedia ha chọrọ.
Ugbu a bụ mgbe ọ na-kpebiri ewebata abụọ ọhụrụ smartphones ịgbakwunye na ndepụta ahụ na LG X5 na X Skin. O kpughere ha n'ụlọ nke aka ya, South Korea, ha abụọ bụ smartphones nke ruru n'etiti etiti na gam akporo 6.0 Marshmallow dị ka nsụgharị na ngwanrọ ahụ. Ekwentị abụọ dị iche na nha ihu igwe na X5 na sentimita 5,5 ya iji nwee Skin nke na-anọ na sentimita ise.
Ejiri LG X5 mara a 5,5 anụ ọhịa ahụ 720p (1280 x 720), 2 GB nke Ram na 16 GB nke ebe nchekwa dị n’ime. Ọnụ a nwere n'ime ya mgbawa nke anyị na-amaghị aha ya, mana ọ nwere isi anọ na ọsọ elekere nke 1.3 GHz na batrị nke ruru 2.800 mAh. Igwefoto azụ nke ọnụ ya bụ 13 MP na ihu nwere igwefoto megapixel 5. O nwere uzo abuo maka kaadi SIM abuo ma nye nkwado maka ntinye 4G LTE. Ihe nha nke X5 bu 151,6 x 76,9 x 7,2 mm na ọ dịrị 133 gram.
Site na LG X Skin anyị maara na ọ ga-abata na ihuenyo 5-inch 720p (1280 x 720), 1,5 GB nke RAM na 16GB nke nchekwa gbasaa n'ime site na kaadi microSD ruo 32GB. Ngwaọrụ a nwere mgbawa quad-core 1.3 GHz na batrị 2.100 mAh. Banyere foto, anyị nwere megapixels 5 n'ihu iji zute oghere MPN 8 na azụ. Ọ nwere SIM abụọ ma nye njikọta 4G LTE. Ekwentị nwere akụkụ nke 144,8 x 71,4 x 6,9mm na ịdị arọ nke gram 122.
Gwọ nke X5 ga-abụ 173 dollar ịgbanwe na South Korea na X Skin ga-aga $ 200. Amabeghị banyere ntọhapụ ya na mba ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG kpughere X5 na X Skin na South Korea na gam akporo 6.0
ZTE mara ọkwa na nubia N1 nwere 5,5 "ihuenyo, igwefoto 13MP na batrị 5.000 mAh
LG G5 adaghị na atụmanya ndị enyere